कुरा मात्रै गर्ने मोहन विक्रम, काम नगर्ने मनमोहन : प्रश्रित
समाचार जीवनशैली कला / साहित्य
डिल्ली आचार्य, सागर चन्द काठमाडौं, १२ जेठ
मोदनाथ प्रश्रित वामपन्थी साहित्यकार । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका जुझारु कार्यकर्ता । पार्टी कार्यकर्ताभन्दा बढी उनी वामपन्थी साहित्यकारका रूपमा परिचित छन् । ‘मानव’ महाकाव्यका लागि २०२३ सालमा मदन पुरस्कार पाएका प्रश्रितलाई गत वर्ष चैतमा हृदयघात भयो ।
काठमाडौंबाट बुटवल जाँदै गर्दा बाटैमा उनलाई हृदयघातले च्याप्यो । र, उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइयो । अस्पतालको लामो बसाइपछि अहिले उनी घरमा आराम गरिरहेका छन् । गत शुक्रबार शिलापत्र टोली उनलाई भेट्न चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित घरमा पुग्यौं ।
प्रश्रितको घरको गेट खोल्नेबित्तकै बगैंचामा मादल, कलम र पेन्टिङ ब्रसको चित्र बनाइएको देखिन्छ । रंगीविरंगी फूलमाझ उभिएको यो चित्रले घरभित्रको लेखकीय माहोल प्रस्ट झल्काउँछ । लेखन र कलाप्रतिको मोह उनको बगैंचामा फूलेका फूलजस्तै छ ।
उनको बैठक कोठाका चारै भित्तामा प्रमाणपत्र, सम्मानपत्र र पेन्टिङ सजिएका छन् । बैठक कोठासँगै टाँसिएको ढोकामा ‘श्यामशोभा पुस्तकालय, स्थापित वि.सं. २०१५, खिदिम–काठमाडौं’ लेखिएको हस्तलिखित बोर्ड झुन्ड्याइएको छ । डिजिटल युगमा हस्तलिखित बोर्ड निकै दुर्लभ मानिन्छ ।
‘मेरा पुर्खा नै सबै शिक्षित थिए । हजुरबा, मावली र मेरा बाहरु असाध्यै अध्ययनशील थिए त्यसैले उनीहरुको नाममा पुस्तकालयको नाम राखको हुँ,’ प्रश्रितले पुस्तकालयको नामको रचना गर्भ सुनाउन थालें, ‘मेरा बा घनश्यामको नामबाट श्याम लिएँ र हजुरबा शोभाकरको नामबाट शोभा लिएर श्यामशोभा नाम राखें ।’
प्रश्रितले २०१५ सालमा अर्घाखाँचीमा पुस्तकालय खोल्दा पितापुर्खा र आफूले संकलन गरेका करिब ४ सय पुस्तक थिए ।
‘अहिले त करिब ३ हजार पुस्तक छन्,’ यही नाममा प्रश्रितको गाउँ खिदिमको स्कुलमा पनि पुस्तकालय छ ।
पुस्तकालयमा कैयौं दुर्लभ पुस्तक पनि छन् ।
७ दशक प्लस ७ वर्ष बिताइसकेका प्रश्रितले ५४ वटा पुस्तक लेखिसकेका छन् । ‘लेखन विधामा मैले संस्कृति, जातजाति र स्वास्थ्यसम्बन्धी लेखेको छु,’ प्रश्रित गर्वसाथ सुनाउँछन् ।
भनिन्छ, कतिपय प्रश्रितकै पुस्तक पढेर कम्युनिस्ट भएका हुन् । आजभोलि आफूलाई गर्वसाथ कम्युनिस्ट भन्नेले उनकै पुस्तक पढेर क्रान्तिकारी चेतसँग परिचित भए ।
प्रश्रितकै पुस्तकलाई वेद तथा गीता मान्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिएका पनि प्रशस्तै छन् । तत्कालीन माओवादीले आफ्नो दस वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा प्रश्रितका पुस्तक पढ्न कार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिएको थियो ।
जीवनको उत्तरार्धमा प्रश्रितले राजनीतिक जीवनबाट सत्न्यास लिए पनि लेखनबाट सन्न्यास लिएका छैनन् । अहिले पनि उनी बिहान साढे पाँच बजे बिउँझिसक्छन् ।
त्यसपछि, ‘प्रणायाम, योगासान गर्छु । लेखनमा लाग्छु । म सरदर अहिले ५ घण्टा जति लेख्ने–पढ्ने गर्छु ।’
प्रश्रित अहिले आफ्नो जीवनकथा लेखिरहेका छन् । जीवनकथाको शीर्षक छ, ‘जीवनका विधि आयाम’ । लेखिरहेको पुस्तकको अन्तर्वस्तुबारे प्रश्रित सुनाउँछन्, ‘अहिले म हाम्रो जीवनबाट हामी कहाँसम्म आयौं भन्ने विषयमा लेखिरहेको छु । यस पुस्तकमा म कुन संस्कृतिमा जन्मे, कुन संस्कारमा हुर्कें, कुन शिक्षा पढे, कसरी माक्र्सवादी भए, कसरी चित्रकलातर्फ मेरो रुचि बस्यो भनेर यसमा लेख्दै छु ।’
आफ्नै पुस्तकमध्ये उनलाई ‘मानव महाकाव्य’ नै मन पर्छ । मानव महाकाव्यमाथि टेलिशृंखल पनि बनिसकेको छ । ‘यसमा मानवतावादी विचारधारा छ । दलित पात्र छन् त्यसैले यो मन पर्छ,’ उनले मन पर्नुको कारण सुनाए ।
जीवनको आधाभन्दा बढी समय लेखेरै बिताए । ५४ वटा पुस्तक लेखिसकेका प्रश्रितले लेखनीबाट कति पैसा कमाए होलान् ? चासोको विषय हो ।
‘लेखेर त के कमाउनु ? धेरैले ठगे,’ प्रश्रितले सटिक जवाफ दिए । यस विषयमा धेरै खुल्न नचाहेका प्रश्रितले भने, ‘पुस्तकको १५ प्रतिशतसम्म रोयल्टी दिए होलान ।’
पुस्तक लेखेर आउने दुई–चार लाख रुपैयाँ पनि पार्टीको काम र पुस्तक किन्नमै खर्च भएको सुनाउँछन् प्रश्रित । उनका सबैभन्दा धेरैपटक पुनर्मुद्रण भएकाका पुस्तकमा मानव महाकाव्य र जीवाणुदेखि मानवसम्म हुन् ।
प्रश्रित आफूलाई अव्यस्थित भन्छन् ।
‘किन ?’ हामीले प्रश्न गर्यौं ?
‘अब कहिले काव्य लेखिरहेको हुन्छु, कहिले उपन्यास लेखिरहेको हुन्छु अनि कहिले भूमिका पनि लेखिरहेको हुन्छु । सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, साहित्यक, व्यावसायिकलगायतका सबैखाले पुस्तक लेखिरहेको हुन्छु । यसकारण, म अस्तव्यस्त भएँ ।’ प्रश्रितले आफू अव्यस्थित हुनुको लम्बेतान कारण सुनाए ।
प्रश्रितले दिएको जवाफमा ‘भूमिका’ शब्दले हामीलाई लोभ्यायो । भूमिका लेखनलाई नै ठूलो लेखन मान्ने प्रश्रितले कति भूमिका लेखे होलान् ? र, आफूलाई भूमिका लेखकभन्दा हुन् ?
‘सूची बनाएर मात्रै ४ सय ५६ पुस्तकको भूमिका लेखेको रहेछु,’ प्रश्रितले आफूलाई भूमिका लेखक भन्नुको कारण उनले लेखेको भूमिकाको अत्यधिक संख्या रहेछ ।
उनले थपे, ‘अझ पहिले–पहिले लेखेका भूमिकाको त सूची नै बनाइनँ । अन्दाज गर्ने हो भने ७/८ सय पुस्तकको भूमिका लेखें होला ।’
प्रश्रित लेखक, साहित्यकारसँगै चित्रकार पनि हुन् । तर, चित्रकलालाई प्रश्रितले व्यवसाय बनाएनन् । किनभने चित्रकारको विषयमा शंकर लामिछानले लेखेका छन्, ‘...पेन्टिङ गर्छ, यसकारण गरिब छ वा गरिब छ, यसकारण पेन्टिङ गर्छ ।’
चित्रकलालाई व्यावसायिक बनाउन नसकेकोमा प्रश्रितलाई पछुतो लाग्छ । जब पछुतो लाग्छ तब उनी ‘जिन्दगी सन्तोक हो’ भनेर मन बुझाउँछन् । थोरै भए पनि मन बुझाउने बाटो पनि छ ।
चित्रकलालाई व्यावसायिक बनाउन नसकेकोमा प्रश्रितलाई पछुतो लाग्छ । जब पछुतो लाग्छ तब उनी ‘जिन्दगी सन्तोक हो’ भनेर मन बुझाउँछन् । थोरै भए पनि मन बुझाउने बाटो पनि छ । किनभने उनले बनाएका चित्र प्रशस्तै प्रयोगमा आएका छन् । ‘चित्रकलामा लागें तर यसलाई व्यावसायिक बनाउन सकिएन । तैपनि, धेरै साथीका पुस्तकको कभर भने मेरा चित्रले भरिएका छन्,’ उनले भने ।
तत्कालीन एमाले पार्टीका ब्यानर लेखन र होर्डिङ बोर्ड लेखनमा समेत उनको चित्र प्रयोग गरेको छ । त्यसैले त उनको पुस्तकालयमा अहिले पनि हस्तलिखित साइनबोर्ड झुन्डिएको छ ।
महाकविको त्यो पूर्ण कद
‘चित्रकलालाई व्यावसायिक बनाउन सकिनँ’ भनिरहँदा प्रश्रितले कोरेका चित्र समेटिएर ‘मेरो चित्रकारिता’ पुस्तक प्रकाशित भएको छ । प्रश्रितको बैठक कोठामा झुन्डिएको एउटा चित्रको कथा भने अचम्मको छ, लोभलाग्दो छ ।
हामीमध्ये धेरैजसोले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अर्ध कदको चित्र देखेका छौं । तर, प्रश्रितको कोठामा भने देवकोटाको पूर्ण कदको चित्र देख्न पाइन्छ । प्रश्रितको कोठामा रहेको चित्रमा देवकोटा दुई हात उचालेर ‘रकेट’ (अन्तरिक्ष यान) सँग उभिएका छन् ।
देवकोटा कवि हुन् तर प्रश्रितले चित्रमा भने देवकोटालाई अन्तिरिक्ष यात्री बनाएका छन् । देवकोटाको मृत्युपछि प्रश्रितले यो चित्र बनाएका हुन् ।
देवकोटा कवि हुन् तर प्रश्रितले चित्रमा भने देवकोटालाई अन्तिरिक्ष यात्री बनाएका छन् । देवकोटाको मृत्युपछि प्रश्रितले यो चित्र बनाएका हुन् । देवकोटाको कवितांश ‘उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’बाट प्रेरित हुँदै आफूले देवकोटालाई अन्तरिक्ष यात्री बनाएको बताउँछन् प्रश्रित । चित्रको क्याप्सनमा प्रश्रितले लेखेका छन्, ‘क्यान्सर जल्यो चितामा, आए म चन्द्रमामा ।’
प्रश्रितले बनाएका चित्र घरका विभिन्न कोठामा झुन्ड्याइएका छन् । घरका लगभग सबै कोठामा प्रश्रितले बनाएका चित्र सजिएका छन् ।
जेल ब्रेकको साक्षी
२०३७ सालमा प्रश्रित पक्राउ परे । पक्राउ परेपछि उनलाई भैरहवाको जेलमा राखियो । जेलमा प्रश्रितसहित अन्य ६ जना थिए । यो समूहले भैरहवाको जेल ब्रेक गरेर भाग्यो ।
जेल ब्रेक गरेर भागेको यो घटनालाई पनि प्रश्रितले चित्रमा उतारेका छन् । ‘ह्याक्सो ब्लेडले झ्यालका डन्डी काट्यौं । तिनै डन्डी र झ्यालका खापा मिलाएर भर्याङ बनाएर जेलको पर्खाल नाघ्यौं,’ भित्तामा झुन्ड्याइएको चित्र देखाउँदै प्रश्रितले जेल ब्रेकको रहस्य सुनाए ।
प्रश्रित आफ्ना युवाकालीन स्मृति सुनाउँदा हौसिन्छन् । केही महिनाअगाडि मात्रै हृदयघात भएका प्रश्रितसँग धेरै कुरा गर्दा उनलाई अप्ठ्यारो हुने हो कि भनेर हामी सतर्कता अपनाइरहेका थियाैं ।
हाम्रो सतर्कताका बाबजुद प्रश्रितले जेल ब्रेक गरेर बाहिरिनुअगाडि जेलमा कविता टाँसेर निस्केको कुरा सुनाए । ‘जेलबाट भाग्नुअगाडि मैले जेलमै कविता लेखेर टाँसें,’ हौसिँदै उनले सुनाए ।
प्रश्रितले जेलमा टाँसेको कविता यस्तो रहेछ–
‘यी द्वीपद्वीपलाई स्टेसन बनाई हिँड्ने
यी चन्द्र, शुक्र, मंगल जङ्सन बनाई उड्ने
आकाशलाई चिर्दै नक्षत्र लोक चहार्ने
हाम्रो अनन्त यात्रा ब्रम्हाण्ड जित्नलाई
के रोक्न सक्छ फुच्चे पर्खालले मलाई’
डा. बनेनन्, वैद्य हुन् तर भनेनन्
प्रश्रित वैद्य पनि हुन् । उनका पितापूर्खा पण्डित्याइँसँगै वैद्यको काम पनि गर्थे । पीतापुर्खाको पाइला पच्छ्याउँदै उनले पनि आयुर्वेद पढे ।
आयुर्वेद उनले व्यावसायिक बन्न पढेका थिए त्यसैले त उनी पार्टीका अभियान र कार्यक्रममा हिँड्दा झोलामा थरीथरीका जडीबुटी बोकेर हिँड्थे । आयुर्वेदप्रतिको आफ्नो मोह र लगाव सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘पार्टीका अभियान र कार्यक्रममा हिँड्दा मेरो झोला जडीबुटी र पुस्तकले भरिएको हुन्थ्यो ।’
आयुर्वेद उनले व्यावसायिक बन्न पढेका थिए त्यसैले त उनी पार्टीका अभियान र कार्यक्रममा हिँड्दा झोलामा थरीथरीका जडीबुटी बोकेर हिँड्थे ।
पार्टीको अभियानमा गाउँगाउँ डुल्दा उनी गाउँलेलाई निःशुल्क जडीबुटी बाँड्थे । आयुर्वेदमा व्यावसायिक बन्ने सोच बनाएका प्रश्रित आयुर्वेद डाक्टर बन्न नकसे पनि उनको आयुर्वेद विद्या भने पार्टीका लागि काम लाग्यो ।
जडीबुटी बाँडेपछि गाउँलेहरु डाक्टर आएको छ भनेर पनि पार्टीको कार्यक्रममा आउँथे ।
आयुर्वेदप्रतिको उनको मोह मात्रै थिएन । उनका लागि आयुर्वेद आदर्श थियो त्यसैले २०५१ मा शिक्षामन्त्री भएको समयमा बिरामी भएका प्रश्रित उपचार गराउन आयुर्वेद अस्पतालमै पुगे ।
कुरा मात्रै गर्ने मोहन विक्रम, काम नगर्ने मनमोहन
धेरैजना वामपन्थी राजनीतिज्ञसँग संगत गरेका प्रश्रित पुराना र चर्चित वामपन्थी नेतालाई कसरी हेर्दा हुन् ? हामीले उनलाई र्यान्डम्ली तीनजना नेताबारे बोल्न भनेका थियौं ।
उनले कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ । मनमोहन अधिकारी, मोहनविक्रम सिंह र तुलसीलाल अमात्यबारे यसो भन्छन्–
गुणैगुण भएका नेता त पाइँदैनन् भन्दै आफ्नो भनाइ सुरु गरेका प्रश्रित पुष्पलालबारे भन्छन्, ‘जस्तो कि आफू फकिर भएर भए पनि देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मरीमेटी गर्ने पुष्पलाल कमरेड ।
सानै गुट भए पनि जहाँ जाँदा पनि चुलो र कोइलासमेत बोकी हिँड्ने तुलसीलाल ।मान्यजन भएका र धेरै काम नगरी प्रसिद्धि पाएका मनमोहन अधिकारी । संगठन बनाउन नसक्ने एक्लै कुरा गर्ने चाहिँ मोहनविक्रम सिंह ।
सानै गुट भए पनि जहाँ जाँदा पनि चुलो र कोइलासमेत बोकी हिँड्ने तुलसीलाल ।
मान्यजन भएका र धेरै काम नगरी प्रसिद्धि पाएका मनमोहन अधिकारी । बौद्धिक सर्कलमा गएर गफगाफ गर्ने । तर, खटेर काम नगर्ने व्यक्ति पनि थिए मनमोहन ।
संगठन बनाउन नसक्ने एक्लै कुरा गर्ने चाहिँ मोहनविक्रम सिंह ।
नेताबारे एक–एक लाइनमा सटिक टिप्पणी गरेपछि उनले नेपालले खोजेजस्तो नेता अझै नभेटाएको भने ।
‘खासमा कस्तो नेता खोजेको छ त नेपालले ?’ हामीले जिज्ञासा राख्यौं ।
‘अझै पनि मैले नेपालको समग्र सम्पदा र नेपालीको क्षमताको ख्याल राख्दै नेपालीलाई प्रशिक्षित गर्ने सोच भएको नेता पाएको छैन्,’ जवाफमा उनले आफूले खोजेको नेताबारे बताए ।
‘स्त्रीलम्पट भए घरभरि स्त्री हुन्थे होलान् !’
प्रश्रितलाई सधैं लाग्ने आरोप हो, उनी स्त्रीलम्पट छन् । यो आरोप कति सत्य हो कति झुटा ? हामीले जान्न खोज्यौं । लामो भूमिका बाँधेर हामीले सोध्यौं, ‘तपाईं केटी भनेपछि हुरुक्कै हुनुहन्थ्यो रे ? यो अभियोग मात्रै हो कि के हो ?’
हाम्रो प्रश्न सुनेपछि प्रश्रित एकछिन हाँसे । त्यसपछि भन्न थाले, ‘होइन, स्त्री जाति पछ्याएको भए कोही न कोही साथ लागेर आउँथे नि त !’
उनी फेरि हाँसे, ‘अब सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नुपर्यो । केटाकेटीलाई नायक नायिका बनाउनुपर्यो, हिँडाउनुपर्यो । संगत गर्नैपर्यो । पार्टी संगठन बनाउनुपर्यो, महिलासँग संगत हुने नै भयो ।’
यति भनेर प्रश्रित एकछिन रोकिए । टेबलमा राखिएको बिस्कुट उठाए, चियाको कपमा च्वाप्प चोपे र क्वाम्प खाए । अनि फेरि एक घु्ट्को चिया पिएर हताहतारमा बोले, ‘फेरि नारीले पनि प्रेम देखाउन त खोज्छन् ।’
लामो भूमिका बाँधेर हामीले सोध्यौं, ‘तपाईं केटी भनेपछि हुरुक्कै हुनुहन्थ्यो रे ? यो अभियोग मात्रै हो कि के हो ?’
प्रश्रितको छेउमै बसेका शिलापत्रकर्मीलाई छुँदै अभिनयको शैलीमा भन्न थाले, ‘हजुरलाई सारै राम्रो मन पर्छ भनेर छोईछोईकन पनि महिलाहरु आउँथे । अब महिलाहरुले यसो गरेको देखेपछि मान्छेलाई लाग्छ, यो मान्छे यस्तै हो कि ?’
हामीले प्रश्न गरेका थियौं । तर, उल्टै उनले प्रश्नमै जवाफ टुंग्याए । हामी अलमलमा पर्यौं । भर्खरै स्वस्थ हुन थालेका मान्छे, त्यसमाथि वृद्ध अवस्थामा पुगेका प्रश्रितलाई धेरै प्रश्न सोध्ने अवस्था पनि थिएन । हाम्रो द्विधा उनले बुझे, सायद ।
उनले भन्न थाले, ‘सार्कीसँग संगत गर्यो भने बाहुनबाट सार्कीमा गयो भन्ने जस्तै आरोप हो यो । जसले जे भनेपछि यस्ता आरोपको प्रतिवाद गर्ने कुरा पनि हुँदैन । तर, आजसम्म कुनै मान्छेले यस्ता आरोप लगाएर मुद्दा हालेका छैनन् ।’
प्रस्ट पार्न खोज्दा खोज्दै उनले केही संकेत गरे । उनले भनेको ‘मुद्दा हालेको छैन’ वाक्यले उनी स्त्रीसँग नजिकन खोज्थे वा थिए भन्ने संकेत मिलेको हो ?
प्रस्ट पार्न खोज्दा खोज्दै उनले केही संकेत गरे । उनले भनेको ‘मुद्दा हालेको छैन’ वाक्यले उनी स्त्रीसँग नजिकन खोज्थे वा थिए भन्ने संकेत मिलेको हो ? स्त्री प्रसंगलाई यही बिट मार्दै हामी उनको मन्त्री कालतर्फ मोडियौं ।
मन्त्री हुँदा गर्व गर्ने काम गरिनँ
मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०५१ सालमा सरकार गठन भयो । अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा प्रश्रित शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याणमन्त्री भएँ । नौ महिने सरकारको नामले समेत परिचित यो सरकारमा रहँदा आफूले शिक्षा मन्त्रीका रूपमा उल्लेख्य गर्व गर्न लायक केही गर्न नसकेको स्विकार्छन्, प्रश्रित ।
‘आखिर किन सकिएन त गर्व गर्न लायक काम गर्न ?’
‘किनभने जम्मा जम्मी नौ महिनाको सरकार भयो । पहिलो एक महिना त मन्त्रालयको सिस्टम र मन्त्रालयबारे बुझ्नै खर्च भयो । अनि, त्यसपछि केही समय म बिरामी पनि परें । अनि, दिनभर थरीथरीका मिटिङमा बसेरै मेरो समय जान्थ्यो । पार्टीको काममा हिँड्नैपथ्र्यो । पार्टीले पनि मन्त्रीलाई नै कार्यक्रममा पठाउन खोज्थ्यो । कुनै पनि मन्त्रालयमा उल्लेख्य केही गर्न पहिलो एक वर्ष त अनुभव नै गर्नुपर्ने रहेछ,’ उनले बेलीबिस्तार लगाए ।
शिक्षामन्त्रीका रूपमा केही गर्न नसके पनि पार्टीको स्कुल विभागमा हुँदा साथीलाई पेन्टिङ गर्न सिकाएको बताउँछन्, प्रश्रित ।
प्रशासन, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय, राजनीति र व्यावसायिक शिक्षा समेटर उनले पुस्तक लेखे । यो पुस्तक लिएर उनले त्यतिखेरका ७५ वटै जिल्लाका धेरै नेतालाई पढाए ।
मन्दिर जान्छु, कर्मकाण्डमा विश्वास गर्दिनँ
आफूलाई नास्तिक र भौतिकवादी भन्ने प्रश्रितले शिक्षामन्त्री हुँदा चरु होम गरेको प्रसंग निकै चर्चित भएको थियो । कम्युनिस्ट भएर धर्मकर्ममा लागेको आरोप उनलाई लागेको थियो ।
तर, २०२० सालदेखि पूजापाठ छाडिसकेको बताउँछन्, प्रश्रित । पूजापाठ छाडिसके पनि उनी मन्दिर गएको बेला मूर्ति भने ढोग्छन् ।
‘कहीँकहीँ यज्ञमा गएको समयमा ढोग्ने कुरा बेग्लै हो । नभए आफ्नै रहरले पूजा गर्न गएको छैन । गइसकेको समयमा औपचारिकताका लागि फूल चढाउने गर्छु,’ उनले भने ।
गाईको मासु खाएँ, फिल्ममा रुचि छैन
साधारण दालभात तरकारी रुचाउने प्रश्रित आफूलाई मांसाहारी पनि भन्छन् । ‘मांसाहारी भनेर के गर्नु त्यो त कहिलेकाहीँ मात्रै हो,’ उनले भने । भारतको मेघालय जाँदा आफूले गाईको मासुसमेत खाएको बताउने प्रश्रित सबैले आआफ्नो इच्छाअनुसार धर्म मान्न पाउनुपर्ने पनि तर्क गर्छन् ।
पाँच वर्षअघि हलमा सिनेमा हेरें
कुराकानीको लगभग अन्त्यमा थियौं हामी ।
अन्त्यमा हामीले सोध्यौं :
फुर्सदमा हुनुहुन्छ, फिल्म कत्तिको हेर्नुहुन्छ ?
‘पाँच वर्षअगाडि हलमा गएर हेरेको थिएँ । तर, फिल्मको नाम भने भुलें । अहिले कहिलेकाहीँ टेलिभिजनमा हेर्ने गर्छु ।’
कति सिनेमा हेर्नुभयो ?
मैले जीवनमा जम्मा जम्मी १२/१५ वटा हेरें होला ।
गीत सुन्नुहुन्छ ?
अँ, मन पर्यो भने गीतचाहिँ सुन्छु । गीतभन्दा बढी कविता सुन्छु ।
पछिल्लो समयका आख्यान र गैरआख्यान पढ्नुभएको छ ?
छैन, पढेको छैन । मेरै संकलनमा रहेका धेरै पुस्तक पढ्न बाँकी छन् । तर, भूमिका लेखाउन आउने भाइबहिनीका किताब भने पढेको छु ।
कस्तो लाग्छ त ?
राम्रै लेखेका हुन्छन् ।
प्रश्रितसँगको कुराकानीको अन्त्यमा आइसकेपछि उनले ‘मेरो चित्रकारिता’ पुस्तक उपहार दिए, हस्ताक्षरसहित । हस्ताक्षर गर्दागर्दै प्रश्रितले सुनाए, ‘पञ्चायत कालमा मेरा कति किताब र चित्रकला त जलाइदिए । कति हराए ।’
त्यसपछि उनले आफ्नी श्रीमतीका पुस्तक संकलन गरिएको कोठा देखाए ।
प्रश्रितकी श्रीमती कविता पौडेल तत्कालीन अखिल नेपाल महिला संघकी नेतृ हुन् । नेपालमा ‘पहिलोपटक हलो जोत्ने महिला’का नामले समेत परिचित कविताले १४ वटा पुस्तक लेखेकी छन् । कविताले पनि हामीलाई ‘छाउगोठमा जीवन’ र ‘काँडाघारीको यात्रा’ नामक पुस्तक उपहार दिइन्, हस्ताक्षरसहित ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, जेठ १२, २०७६, १२:२४:००
संविधानको खिलाफमा संघीय सरकार
डिल्ली आचार्य, सागर चन्द